प्रवास – Page4– Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / प्रवास (page 4)
डा. पौडेल एनआरएनए आइसिसीको महासचिव लड्दैं
4 weeks ago प्रवास 0
विश्व न्युज संवाददाता न्यूयोर्क, २७ सेप्टेम्वर । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महासचिव पदका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले तयारी थालेका छन् । औपचारिक रुपमा उम्मेद्वारी घोषणा भइनसेकेपनि डा. पौडेललाई महासचिवको उम्मेद्वार बनाउन आन्तरिक तयारी भएको बुझिएको छ । अन्तराष्ट्रिय …
अमेरिकाभित्रका सामाजिक संस्थामा महिला सहभागिता अति कम
4 weeks ago प्रवास, समाचार 0
कल्पना घिमिरे / न्यूयोर्क झण्डै १२ वर्ष भयो अमेरिकामा जनसम्पर्क समितिको स्थापना भएको । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थाको कार्यसमितिमा भने महिला सहभागिता २–३ जनाभन्दा बढ्न सकेन । नेपाली कांग्रेसको प्रवासी भातृ संगठनका रुपमा अमेरिकामा स्थापित संस्थाको विधानमा समेत महिला सहभागिताबारे केही उल्लेख नहुनुले महिला अधिकारका क्षेत्रमा हामी कति …
फरक शैलीमा रमाउँदै शैली
कल्पना घिमिरे / न्यूयोर्क तस्बिर: अनुज थापा ६ साता अघिसम्म पनि शैलीलाई थाहै थिएन अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरको प्रख्यात गोथम कमेडी क्लबमा आफ्नो प्रस्तुती दिँदैछु भन्ने । जहाँ नाम चलेका अमेरिकन कमेडियनहरुले प्रस्तुती दिने गर्छन् । आफूले कल्पनासम्म नगरेको अवसर अमेरिका आएको छ हप्तामै पाउनु शैली बस्नेतको जीवनमा बिर्सनै नसक्ने उपलब्धि …
अमेरिका बसेर नेपाली राजनीतिमा दिन बिताउँदा खर्चचाहिं कसरी चल्छ ?
विष्णुहरि घिमिरे / पेन्सलभानिया कामै नगरी सुख नपाइने ठाउँ हो अमेरिका । तर, क्यालिफोर्निया बस्दै आएका सर्वज्ञ वाग्ले पछिल्लो तीन महिना नियमित काममा गएनन् । त्यस्तै, रवीना थापाले पनि लगभग एक वर्ष आफ्नो व्यापार व्यवसायमा पूर्णरुपमा समय दिन पाइनन् । फुर्सदको समयमा साहित्य सृजनामा रमाउने वाग्ले काममा नजानुका कारण थियो, …
जब न्यूयोर्कका सलाम र लतिफाले कांग्रेस नेता पौडेललाई भेटे..
विजय पौडेल / न्यूयोर्क विगत २४ वर्षदेखि अमेरिकामा भविष्य खोज्दै गरेका बंगाली मूलका अमेरिकन सलाम भूइयानले जीवनमै पहिलोपटक यसै वर्षको शुरुमा नेपाल भ्रमण गरे । २४ वर्षअगाडि विद्यार्थी भिसामा अमेरिका आएका सलाम न्यूयोर्कस्थित कुइन्स कलेजबाट कम्प्युटर साइन्समा ब्याचलर र एनवाई आईटीबाट बिजनेसमा स्नातकोत्तर गर्न सफल भए । सलाम र न्यूयोर्क …
4 weeks ago प्रवास, भिडियो 0
September 23, 2017 खेलकुद, प्रवास 0
डलास (टेक्सस) । अमेरिकाको डलासमा संचालिक डलास क्रिकेट प्रिमियर लिगमा नेपाली क्रिकेट टोली नेपाली राइनोज क्रिकेट क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ । क्लबले आफ्नो पहिलो खेलमा शुक्रवार टिसिसी प्यान्थेरस क्लबलाई १० रनले हराएको छ । पहिलो खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिगं रोजेको नेपाली राइनोजले निर्धारित २० ओभरको खेलमा १९ दशमलव …
September 21, 2017 प्रवास, समाचार 0
जानु पंगेनी/सिकागो ६ वर्ष अघिसम्म निकेश थपलियाको परिचय साँघुरो थियो । समाजमा चिनिने आधार पनि सजिलो थिएन । तर, सन् २०११ यता भने यिनलाई धेरैले चिन्छन् । नचिनेकाहरुमाझ पनि उनलाई चिनाउन गाह्रो छैन । निकेशले आफ्नो नामसँगै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डरको नामसमेत जोडेका छन् । २४ वर्षीय थपलियाले आजभन्दा …
September 20, 2017 प्रवास, मनोरञ्जन 0
लोकदोहोरी गायिका बिना छन्त्यालले भर्खरै मात्र काफल चरी बोलको गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । एकनारायण भण्डारीको शब्द र संगीतमा लोकदोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मासँगै उनले गाएकी हुन् । विशेषगरी दोहोरी गीतका पारखीमाझ लोकप्रिय बनेको यो गीतले नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा विशेष चर्चा कमाइरहेको छ । छन्त्याल समुदायमा औंलामा गन्न सकिने गायिकामध्ये उनले …
दुर्गालाललाई महानन्द साहित्य साधक पुरस्कार
September 20, 2017 प्रवास 0
डलास । महानन्द सापकोटा साहित्य साधक पुरस्कार कवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) डलास हरेक वर्ष नेपाली भाषा साहित्यमा योगदान पु¥याएवापत दिँदै आएको सो पुरस्कार यस पटक श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको हो । भाषाविद् महानन्द सापकोटाको सम्झनामा उनकै परिवारको प्रायोजनमा स्थापना गरिएको पुरस्कारस्वरुप …